बाल्याकालमा मनमा परेको चोटले यसरी निम्त्याउँछ डिप्रेशन - Samachar PatiSamachar Pati
आफ्नै बाबुले गरेको पटक पटकको यौन हिंसा तथा दुष्कर्मका कारण उनी यति धेरै विक्षिप्त अवस्थामा पुगिन् कि ठूलै भइसक्दा पनि उनको मनबाट उक्त डर र त्रास हट्न सकेन । उनको मनमा पुरुषप्रति यति धेरै वितृष्णा थियो कि पुरुष भन्ने शब्दसितै घृणा गर्थिन् । परिणामस्वरूप बाल्यावस्थामा मनमा परेको गहिरो चोटका कारण उनको वैवाहिक जीवनमा मात्र असर परेन, उनले पटक पटक आत्महत्या गर्नेसम्मको असफल प्रयास गरिन् ।
-समाजमा मानसिक रोगको औषधीलाई लिएर गलत धारणा व्याप्त छ । जब कि यस्ता औषधि निश्चित समय खाएकै भरमा विरामीलाई निको पार्न सकिन्छ । औषधि नियमित रूपमा सेवन गर्न भने जरुरी छ । औषधीको सेवनले व्यक्तिको कार्यसम्पादन राम्रो हुने गर्छ । बरु औषधी नखाएको खण्डमा व्यक्ति गम्भीर समस्याबाट ग्रस्त हुने तथा गम्भीर रोगको सिकार हुने गर्छ । यस अर्थमा आफ्ना भावनालाई नियन्त्रणमा राखेर पनि यस किसिमको ट्रमाबाट बाहिर निस्कन सकिन्छ भने परामर्शदाताको उचित परामर्शको आधारमा पनि यो रोग निको पार्न सकिन्छ ।
मुटु थामेर हेर्नुहोस || कर्णालीको पुलबाट उल्टो जिमन्यास्टिक हान्ने यो मान्छे को होला ??
ध्यान दिनुहोस् ! निन्द्रा नपुगे हुन्छन् यस्ता समस्या